GED ® khayraadka iyo macluumaadka | waxbarashada USAHello | USAHello
shahaadada GED® A waa shahaadada waxbarashada guud. Waa set oo ah baadhitaano in aad tusto aqoon heer dugsi sare. Lahaanshaha Aqoonsiga GED® a kaa caawin kara inaad shaqo hesho. Akhri wax dheeraad ah
TASC u taagan tahay Baaritaanka Qiimaynta Dhameystirka Secondary. imtixaanka TASC The la mid tahay baaritaanka GED® ah. Helitaanka shahaadada TASC ka dib markii imtixaanka marayay muujinaysaa inaad leedahay aqoon heerka dugsiga sare. Akhri wax dheeraad ah
HiSET A waa mid ka mid ah saddexda imtixaan ee USA muujinaya aad leedahay aqoon heer dugsiga sare, haddii aadan dugsiga sare. Waxa ay la mid tahay aqoonsiga GED® laakiin bixiyeen in gobolo kala duwan. Akhri wax dheeraad ah
aragtida macalinka A ee ku saabsan sida loo guulaysto dugsiyadaSameynta si fiican dugsiga ka dhigan tahay wax ka duwan in dal kasta. macalinka A ka Ciraaq qaybsada fikraddiisa ku saabsan sida loo guulaysto dugsiyada.
Riyadeyda waa inaan ku noqon macallinWadamada qaarkood, inay ku adag tahay haweenka si ay u helaan waxbarasho kulliyad. wadahadalo cusub A ku saabsan raad iyada riyo ah in uu macalinka a ee USA
nidaamka iskuulka USA iyagoo isha kuhaya ardayga qaxootiCaqabadaha qaxootiga kulmaan nidaamka waxbarasho ee Maraykanka. qaxootiga intooda badan u dhaqaaqo America si fudud maxaa yeelay, iyagu ma ay leeyihiin mustaqbalka kasta oo ku nool xerada qaxootiga.